Fikradaha DIY ee alaabta guryaha | Farsamada On
Fikradaha DIY ee alaabta guriga
Jenny monge | | Qurxinta, Farsamooyinka Guryaha, Dib u warshadaynta
Salaamu caleykum Maqaalka maanta waxaan ku arki doonaa dhowr fikradaha dib u warshadaynta alaabta guriga, Qaarkood aad bay u xagjirsan yihiin, qaar kalena waxay si fudud ugu daraan xoogaa faahfaahin ah sida khaanad ama dabool qayb ka mid ah alaabta guriga.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay yihiin fikradahaasi?
1 Fikradda alaabta guriga ee DIY lambarka 1: Sida loo dayactiro qol duug ah.
2 Fikradda DIY ee lambarka alaabta guriga 2: Sanduuqa xadhigga si loo daboolo daldaloolada alaabta gurigayaga.
3 Fikradda DIY ee lambarka alaabta guriga 3: Cusbooneysii dahaarka jeexjeexay ee saxarada.
4 Fikradda DIY ee lambarka alaabta guriga 4: khaanadaha alaabta guriga.
Fikradda alaabta guriga ee DIY lambarka 1: Sida loo dayactiro qol duug ah.
Alaabta duuga ah waxay ka horrayn kartaa nolol dheer haddaynu fursad siino oo dib u habayn ku samayno si ay u eegaan sida aanu jecelnahay.
Waxaad arki kartaa sida loo sameeyo fikradan tallaabo-tallaabo adiga oo raacaya xiriirka hoose: Sida loo dayactiro qol jiif hore
Fikradda DIY ee lambarka alaabta guriga 2: Sanduuqa xadhigga si loo daboolo daldaloolada alaabta gurigayaga.
Habka ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo muuqaalka alaabtayada waa in la sameeyo khaanadaha xargaha quruxda badan kuwaas oo sidoo kale faa'iido u leh ilaalinta nidaamka guriga.
Waxaad arki kartaa sida loo sameeyo fikradan tallaabo-tallaabo adiga oo raacaya xiriirka hoose: Waxaan u samaynaynaa khaanad godadka ku yaal alaabta guriga
Fikradda DIY ee lambarka alaabta guriga 3: Cusbooneysii dahaarka jeexjeexay ee saxarada.
Saxarada iyo kuraasku waxay si buuxda u bedeli karaan muuqaalkooda iyagoo bedelaya maqaarkooda, markaa waxaan ku tusineynaa hab aad ku sameyso oo aad u soo kabsato kuraasta.
Waxaad arki kartaa sida loo sameeyo fikradan tallaabo-tallaabo adiga oo raacaya xiriirka hoose: Sida dib loogu cusbooneysiiyo xoogaa alaab ah
Fikradda DIY ee lambarka alaabta guriga 4: khaanadaha alaabta guriga.
Waxaa suurtagal ah in aan helno alaab guri oo aan rabno inaan isticmaalno laakiin gudaha khaanadaha ayaa waxyeeloobay, hal xal ayaa ah in la daboolo gunta si ay u awoodaan inay sii wataan isticmaalkooda dhib la'aan.
Waxaad arki kartaa sida loo sameeyo fikradan tallaabo-tallaabo adiga oo raacaya xiriirka hoose: Sida loo xiro khaanadaha duugga ah ee qadiimiga ah
Waxaan rajeynayaa in lagugu dhiirigeliyay oo aad sameyso qaar ka mid ah fikradahan si aad u cusboonaysiiso alaabta gurigaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Farsamada gacanta On » Farshaxanada » Farsamooyinka Guryaha » Fikradaha DIY ee alaabta guriga
Ciyaarta udgoonka ee eeyaha leh tubooyinka kartoonada ee warqadda musqusha
Fikradaha quudiyeyaasha iyo guryaha shimbiraha